Varidzi veMedia | NS6.com
Kunze kwekumba kushambadzira
Solution yeMedia Varidzi
Tora mukana kune ese maturusi ayo NS6 inokupa seMedia Muridzi.
Maitiro edu eMedia Varidzi
Ne NS6 iwe unozogona maneja vako vangangove vatengi, kudyidzana navo uye kugona kuvapa kune ako ekushambadzira nzvimbo nekukurumidza uye zvakanaka. Icho chishandiso chakanangiswa chete pamusika uyu.
Nyoresa nzvimbo nyowani dzekushambadzira, kugadzirisa ruzivo rwako kana kudzima. Mu NS6 maitiro aya anokurumidza uye anoshanda; upload mapikicha kana kusunga ako ekushambadzira nzvimbo kune ako vatengi.
Chengetedza ruzivo rwako zvakarongeka uye zvakachengeteka mugore; inobvumira timu yako yese kuwana ruzivo rwakagadziridzwa munguva chaiyo, yakanakira makambani ane nzvimbo dzekushambadzira mumatunhu akasiyana.
Batanidza nekukurumidza nevanogona kuve vatengi
Nzvimbo dzako dzekushambadzira dzichaonekwa mukati meNET6 Media Buyers network, zvichikubvumidza iwe kuti usvike vatengi mune mamwe matunhu uye vhara madhiri zviri nyore. Kubata mu NS6 kwakanangana newe, pasina vamiriri.
Shambadzira yako Yekunze-kwemusha Media Kushambadzira izvozvi